Waxyaalaha kuu sahli kara diyaarinta khudbad wanaagsan Qore: Macallin C.risaq Maxamed Xuseen | Laashin iyo Hal-abuur
Qofku kolka uu khudbad jeedinaayo, ujeedada ugu balaaran ee uu leeyahay waxaa weeyaan in uu fariinta uu xambaarsan yahay gaarsiiyo ama u gudbiyo dadka isaga dhegeysanaaya. Fariintaasu waxa ay noqon kartaa mid diin ku saleysan , mid siyaasadeed ama mid ku saabsan cilmiyada kale ee bulshada. Haddaba suàasha isweydiinta mudani waxaa weeyaan: Sidee ayey khudbadaadu ku noqon kartaa mid si wanaagsan u fulisa ujeedadii aad ka lahayd? Sidee khudbadaadu ku noqon kartaa mid soo jiidata dhegeystayaashii ay ku wajahnayd?.
Su àalahaas jawaabtooda waxaan ka dhex heli doonaa qoddobadaan kooban ee hoos ku qoran.
Dhegeystayaasha khudbaddu waa kuwa noocee ah?
Waa inaad ugu horeyn si wanaagsan u deristaa dadka ku dhegeysan doonaa nooca ay yihiin. Ma dad waayeel ah ayey u badan yihiin mise dhalinyaro? Aqoonta ay leeyihiin waa mid noocee ah? Guud ahaan maxay xiisaynayaan dadkaas ku dhegeysanaya? Isweydiinta Suàalahani waxa ay kuu fududaynaysaa inaad khudbadaada ku adeegsato erayo ay dadka ku dhegeysanayaa si wacan u fahmi karaan. Taas waxaan ula jeedaa iyadoo ay inta badan kala duwan yihiin erayada la isticmaalo hadii lala hadlayo dad aqoon leh iyo hadii lala hadlaayo dad beeraley ah oo aan wax aqoon ah laheyn.Qaybaha kala duwan ee cilmiga waxaa ay leeyihiin ereyo u gaar ah oo ay fahmi karaan dadka qaybahaas cilmiga ku xeel dheer. Waxaa jira waxyaalaha lagu magcaabo dhaqan luuqadeed.Tusaale ahaan ninka beeraleyda ahi luqad buu leeyahay, kan farsamayqaanka ahi luqad buu leeyahay,ganacstadu luqad bey leeyihiin.Sidaas darteed waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad warbixin buuxda ka heshid dadka aad la hadleysid. Haddii kale waxaa aad khatar ugu jirtaa in khudbadaadu noqoto mid aan la xiiseyneynin, dadkuna ku caajiso, kuna wajahan wado qalad ah
Haddaba kolkii ujeedada iyo nooca khudbadaadu ay kuu cadaato, waxaad kaloo baaritaan ku sameyneysaa arimaha ay ka mid yihiin wakhtiga aad khudbada jeedineysid iyo weliba meesha aad ka jeedineysid. Waa kala duwan tahay haddii aad khudbadaada ka soo jeedineysid hool weyn oo dadku kaa fog yahay iyo haddii aad kasoo jeedineysid qol yar oo la is horfadhiyo.Wakhtigu siyaabo badan ayuu muhiim u yahay.Ma subax hore oo dadku weli hurdeysan yihiin baad khudbadaada jeedin doontaa mise duhurkii mise intaasba maahee waxaad jeedin doontaa goor habeen ah. Wakhtiga aad khudbada jeedineysid waxaa uu aad muhiim ugu yahay qaabka aad ku bilaabi lahayd khudbadaada. Tusaale ahaan haddii khudbadaadu ku aadan tahay goor aroor ah waxaa haboon inaad waxoogaa inta aadan khudbadaada rasmiga ah guda gelin aad dadka kaftan iyo arrar ku soo dhoweysid. Kolkii aad dareento in caajiskii sii baxaayona aad muhiimada khudbadaada guda gashid. Waxaa kaloo iyana muhiim ah inaad ogaatid wakhtiga khudbadaada loogu tala galay si aad u qorshaysato waxii aad oran lahayd.
Kolkii aad halkan soo gaartid waxaa kuu dhan boqolkiiba sagaashan khudbadaadii.Waxaad haysataa mowduucii, isla markaasna waxaad soo akhrisay wax badan oo mowduucaas ku saabsan, warbixintii aad u baahnayd ayaad soo urursatay. Waxaa kaloo haddaba lagaa rabaa inaad goàan ka gaartid sidii aad hadalkaaga u kala hor marin lahayd, Adigoo eegaayaa ujeedada khudbadaada, dadka ku dhegeysanaya iyo weliba arimaha kale ee aan horay uga soo sheegnay.
Waxaa iyana haboon inaad khudbadaada u sameysid meel bilow ah, meel dhexe iyo meel dhamaad ah. Taasi waxay dadka ku dhegeysanaayo u fududayneysaa iney si aan hakad lahayn khudbadaadii ula socdaan.
Arimahaas oo dhan kolka aad ka fekerto waxaa ay khudbadaadii noqoneysaa mid xiiso leh oo dadku u riyaaqaan. Waxaa ayna dhalin kartaa in lagaa casumo meelo badan oo khudbad laga jeedinaayo
Xusuusin: Waxaan khudbad kasoo jeediyaa golayaal kala duwan oo la igu casumo, waxaana khudbada u diyaarsadaa sida aan kor kaga soo hadlay. Taasi waxaa ay keentaa in khudbadahaygu noqdaan kuwo si aad ah ay dadku u jecel yihiin, ugana faa`iideystaan.
Qore: Macallin C.risaq Maxamed Xuseen